उवासंघको नयाँ नेतृत्वलाई बधाई ! – Chitwan Post
उवासंघको नयाँ नेतृत्वलाई बधाई !
चितवनको अग्रणी उद्योग वाणिज्य संघ–चितवनले यतिबेला नयाँ नेतृत्व पाएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि भएको ५३औँ साधारण सभा एवम् अधिवेशनका लागि महिनौँअघिदेखि चुनावी सरगर्मी र रस्साकस्सी चलेको थियो । सुरूवातमा राजु श्रेष्ठ र चुननारायण श्रेष्ठबीच अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा हुने चर्चा चलेको थियो । संघमा नयाँ प्रयोगका रुपमा दुवै आकाङ्क्षीबीच गोलाप्रथा गराएर ऐतिहासिक अधिवेशन गराउने पूर्वअध्यक्षहरुको योजनाले मूर्तरुप लिन सकेन । गोलाप्रथाको सहमतिअनुसार राजुलाई अध्यक्ष र चुननारायणलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सर्वसम्मत गराउने रहेको थियो । तर, संघको संस्थापनले गोलाप्रथाबाट उमेदवार छनोट गर्ने पद्धतिप्रति कांग्रेसको विमति रहेपछि अधिवेशनले गम्भीर मोड लियो । पूर्वअध्यक्षहरुले गर्न खोजेको सहमति उल्टिएपछि अध्यक्षमा ज्ञानेन्द्रमान शाक्यलाई प्रतिस्पर्धामा उतारियो । जुन संस्थापनको लागि नयाँ चुनौतीमात्र बन्न पुगेन, संघको राजनीतिमा तरङ्ग नै उत्पन्न भयो । उवासंघ चितवनमा यसपटक सतहमै देखिने गरी व्यवसायीहरु दुई खेमामा विभाजित भए । निर्वाचनको भिडन्तमा उत्रिएका अध्यक्षका उमेदवार श्रेष्ठ निवर्तमान अध्यक्ष सहनलाल प्रधानसँग र शाक्य डा. तिलचन्द्र भट्टराईसँग पराजित भएका थिए । त्यसैले, यो निर्वाचनमा कसले बाजी मार्ला भन्ने बहसको विषयमात्र बनेको थिएन, अधिवेशनले नयाँ मोड लिएपछि अङ्कगणितीय जोड–घटाउ सुरू भएको थियो । अन्ततः अपेक्षा गरिएभन्दा भारी मतअन्तरका साथ राजु श्रेष्ठले बाजी मारे ।
यतिबेला पूर्वअध्यक्षहरुले गरेको सहमति वैज्ञानिक रहेछ भन्ने अनुभूति सबैले गरेको हुनुपर्छ । अब चुनावी प्रतिस्पर्धा विगत भइसक्यो । प्रतिस्पर्धी शाक्यले श्रेष्ठलाई सफल कार्यकालको शुभकामनासहित बधाई पनि दिइसके । अब भने नयाँ नेतृत्वका लागि अवसरसँगै चुनौती उत्तिकै देखिएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि उद्योेगी व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्दै संघलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउनुपर्ने अभिभारा थपिएको छ । चुनावी अभियानका क्रममा गरेका प्रतिबद्धताहरु पूरा गर्दै कार्यसमितिलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गर्नु नेतृत्वको पहिलो दायित्व हुन आउँछ । अघिल्लो चुनावमा प्रधानसँग पराजित भएका श्रेष्ठले आफ्नो साख कति बढाएका रहेछन् भन्ने दृष्टान्त पनि यसै निर्वाचनले देखाएको छ । श्रेष्ठले एक हजार ९८० मत ल्याउँदा शाक्यको पक्षमा एक हजार १९३ मत खसेको थियो । तीव्र प्रतिस्पर्धा भनिएको निर्वाचनमा श्रेष्ठले ७८७ मतान्तरका साथ विजयी भएर आश्चर्यसहित संघमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न गरेका छन् । चुनाव आफैँमा प्रतिस्पर्धा र अङ्कगणितको खेल हो । यो खेलमा श्रेष्ठ सफल ठहरिएका छन् । संघको नयाँ नेतृत्व हस्तान्तरणसँगै चुनावी मतपरिणामलाई आत्मसात् गर्दै संघको बृहत्तर हितका निम्ति सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य हुन आउँछ ।
चुनावी नतिजाले संघमा नेतृत्व गर्न पाउने ऐतिहासिक अवसर सिर्जना भएको छ । नयाँ नेतृत्वलाई उवासंघलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने मह¤वपूर्ण अवसरसँगै उद्योगी व्यवसायीले भोग्नु परेका तमाम समस्या समाधान गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धताअनुसार संघलाई अघि बढाउनुपर्ने देखिएको छ । स्वर्णमहोत्सव मनाइसकेको उवासंघमा श्रेष्ठले नेतृत्व गर्न पाउने सौभाग्य हासिल गरेका छन् । दुईवर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित कार्यसमितिका श्रेष्ठ प्यानलका साथै मिश्रित नतिजा आएको छ । संघका सबै उद्योगी, व्यवसायीकोे विश्वास जितेर काम गर्न सकेमात्रै कार्यकाल सफल हुनेछ । सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० को थालनी गरिसकेको सन्दर्भमा भ्रमण वर्षलाई सार्थक बनाउन थुप्रै गतिविधि र कार्यक्रम गर्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्रका विविध सवाल बाँकी छन् । घर बहाल, बजार बन्दमा एकरुपता, व्यावसायिक बजारको व्यवस्थापन, उत्पादनको बजारीकरणजस्ता उद्योगी व्यवसायीका समस्या र विवाद अझै सुल्झिएका छैनन् । भरतपुर महानगरसँग समन्वय गरी नारायणी नदीकिनार व्यवस्थापन, सरसफाइलगायतका विषयलाई निरन्तरता दिनुपर्नेछ भने वस्तुगत संघहरुबीच र चितवनको औद्योगिक क्षेत्रलाई अघि बढाउन पनि मह¤वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ । संघलाई राजनीतिक छायाबाट मुक्त गरी व्यावसायिक हकहितको संरक्षणतर्फ नयाँ नेतृत्व लाग्न सकोस्, नवनिर्वाचित सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई !
मनाइयो ‘राष्ट्रिय योग दिवस’